Maxaabiis ku xirneyd saldhigga booliska Jowhar oo cafis loogu fidiyay ciida awgeed-Sawirro – Radio Muqdisho
Maxaabiis ku xirneyd saldhigga booliska Jowhar oo cafis loogu fidiyay ciida awgeed-Sawirro
Guddoomiyaha gobolka Shabeela dhexe ayaa cafis u fidiyay maxaabiis ku xirneyd saldhiga Booliska magaalada Jowhar munaasabada ciidul Fitriga awgeed ee fooda nagu soo haysa awgeed.
Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) oo ay weheliyaan qaarka mid ah mas’uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa booqday maanta saldhiga Booliska degmada Jowhar waxana uu soo saaray amarkan lagu cafinayo sagaal ka mid ah maxaabiista ku xiran saldhiga Jowhar ku was oo aan gelin dambiyo culculus.
Afhayeenka maamulka gobolka Shabeelaha dhexe, Daa’uud Xaaji Cirro, oo ka hadlay siideynta maxaabiistan ayaa sheegay in 9 maxbuus oo mid ka mid ah ay tahay haweeney loo fidiyay cafis si ay ula wadaagaan qoysaskooda ciid Al-Fitriga.
Maxaabiista cafiska loo fidiyay ayaa aad ugu farxay iyagoo u mahadceliyay maamulka gobolka Shabeelaha dhexe.
Ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe oo aad u wanaagsan awgeed ayaanay jirin maxaabiis dambiyo culculus loo haysto hase yeeshee waxaa u badan dadka isku haysta lacago la kala amaahday iyo khilaaf dhinaca qoyska u badan.
W/D: Cabdinuur Muudey
Daawo sawirada soo dhaweynta ciyaartoyda wadanka Iceland